Makoshesero akakosha munhoroondo yepasirodhi chirimwa ari, pamusoro pezvose, kuiswa kwemichina yekurongedza mabhokisi mumakore ekuma1970 na1989, ayo akaunza kuwedzera kwakanyanya pakushanda kwekugadzira. Mumakumi mapfumbamwe ezana ramakumi maviri emakore, pasi peiyo EMBA chinyorwa, kuvandudzwa kwemakadhibhodi ekuchengetedza zvakakwana zvinyorwa zvebhizinesi uye zvinyorwa zvetsika uye nhoroondo zvakatanga. Mune milenia nyowani, chigadzirwa chekugadzira chakapera nemitsetse yekugadzirwa kwehofisi lever binders.
2020 archivbox karenda EMBA EMBA spol. S Ro wakatsetseka kabhodhi Mountains Giant khalenda Krkonoše bhainda pagore kugadzirwa kabhodhi bepa kugadzirwa
Tags: 2020 archivbox karenda EMBA EMBA spol. S Ro wakatsetseka kabhodhi Mountains Giant khalenda Krkonoše bhainda pagore kugadzirwa kabhodhi bepa kugadzirwa
Nzvimbo: Paseky nad Jizerou 235, 512 47 Paseky nad Jizerou, Czech Republic